Jigjiga: ONLF oo saxiixday heshiis hub ka dhigis ah - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Jigjiga: ONLF oo saxiixday heshiis hub ka dhigis ah
Jigjiga: ONLF oo saxiixday heshiis hub ka dhigis ah
February 9, 2019 February 9, 2019 Cali Yare267
Heshiis ay wada saxiixdeen Jabhada ONF iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ahaa in dagaalyahanada Jabhada lagu sameeyo hub ka dhigis, taasi oo guul la taaban karo u ah Guud ahaan Itoobiya gaar ahaan ismaamulka Soomaalida.
Jabhada ONLF waxaa la aas aasay 1984, waxaana uu dagaal nuucyo badan uu kala dhaxeeyay Itoobiya oo ay ku sheegeen xiligaasi in ay dhul Soomaaliyeed ay xoog ku heystaan.
Itoobiya ayaa dhankeeda waxa ay u aqoonsaneed ONF Jabhad argagaixiso ah ilaamaa uu Abiy Axmed ka qaaday shaabadii argagixisinimo, waxaana baarlamaanka Itoobiya ay 5’tii bishii Julaay ee sanadkii tagay ay liiska argagaxisada ka saareen ONLF.
Duqeymaha Maraykanka ma looga adkaan karaa Al-Shabab?
Mudane maammadan musharraxeedii ma tahay?! W/Q: Cabdulqaadir Cali Axmed
Abshir Bukhaari iyo Wafdi uu hugaaminayo oo Cadaado ku wajahan
September 27, 2017 September 27, 2017 Cali Yare